Kaokazy - Wikipedia
I Kaokazy na Kaokazia na Kavkazy na Kavkazia dia faritr' i Eorazia be tendrombohitra izay mitandavana eo amin' ny 1 200 km, avy any amin' ny andilan-dranomasin' i Kertch (Ranomasina Mainty) ka hatrany amin' ny saikanosin' i Apcheron (Ranomasina Kaspiana).
Sarin-tanin'i Kaokazy maneho ny fikitoantoanana
Amin' ny teny rosiana dia atao hoe Кавказ / Kavkaz i Kaokazy, amin' ny teny jeorjiana dia atao hoe კავკასია / Kawkasia, amin' ny teny armeniana dia atao hoe Կովկաս / Kovkas, amin' ny teny azerbaijaney dia atao hoe Qafqaz, amin' ny teny torka dia atao hoe Kafkas, amin'ny teny persana dia atao hoe قفقاز‎ / Qafqāz.
Mizara roa i Kaokazy ka ny iray atao hoe Kaokazy Atsimo na Transkaokazia, ka mahafaoka an' i Jeorjia, i Armenia, i Azerbaijàna ary ny faritr' i Kars any Torkia, ny faharoa atao hoe Kaokazy Avaratra na Siskaokazia, izay ao Rosia (mahafaoka ny Repoblikan'i Karatsaievô-Tserkesia, ny Repoblikan' i Kabardinô-Balkaria, ny Repoblikan'i Ôsetia Avaratra, ny Repoblikan'i Ingosia, ny Repoblikan'i Tsetsenia ary ny Repoblikan'i Dagestàna). Amin' ny lafiny fitantanana dia mahafaoka ny Repoblikan' i Adigea sy ny Krain' i Stavrôpôly ary ny Krain' i Krasnôdara i Kaokazy Avaratra na Siskaokazia.
Ara-jeografia, araka ny efa mahazatra dia heverina fa i Kaokazy no manasaraka an' i Eorôpa ao avaratra amin' i Azia ao atsimo, nefa ny jeôgrafian' i Jeôrjia sy ny an' i Armenia dia manao azy ho faritra eorôpeana ka mametraka ny sisin' i Eorôpa ao Araksa sy amin' ny sisin-tany torka. Raha heverina ho eorôpeana i Kaokazy dia izy no tangoron-tendrombohitra avo indrindra ao Eorôpa.
Ireo faritra ara-dafintany ao Azia
Fizaràm-paritra hafa ao Azia
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaokazy&oldid=1037003"
Dernière modification le 1 Septambra 2021, à 15:19
Voaova farany tamin'ny 1 Septambra 2021 amin'ny 15:19 ity pejy ity.